Kubantu abadala: Rip Music kwiCD okanye kwiDVD
Ukuba ilaptop yakho yeWindows ineCD / DVD drive kwaye ubeka iCD / iDVD kuloo drive, Windows Media Player iya kubuza ukuba uyafuna na Lala kakuhle umculo osuka kwi-disc uye kwi-laptop yakho. Ngokwenza njalo ugcina zonke iindlela kwilaptop yakho.
Ukulawula ukukrazula kusebenza njani, qalisa ukucofa Zonke iiqhosha kwi-screen yokuqala kwaye ufumane kwaye ucofe iWindows Media Player kuluhlu lweapps. Cofa iqhosha lokuLungiselela kwaye ukhethe uKhetho.
Cofa kwiRip Music tab ukuyibonisa.
Iziphumo zecala lehydrochlorothiazide / losartan
Kwibhokisi yencoko yababini, ungenza useto olulandelayo:
Cofa u Guqula iqhosha lokutshintsha indawo apho umculo okrazukileyo ugcinwa khona; Indawo emiselweyo yincwadi yakho yoMculo.
Cofa u Igama lefayile iqhosha lokukhetha ulwazi oluza kubandakanywa kumagama efayile yomculo oqwengileyo kwiLaptop yakho.
Khetha ifomathi yeaudio oza kuyisebenzisa ngokunqakraza kwi Ifomathi Uluhlu olwehlayo kwi-Rip Music tab.
Ukuba unemvume yokukopa kunye nokusasaza umculo, awunakufuna ukukhetha ibhokisi yoKhuseleko loMculo. Ukuba ukhuphela umculo owuhlawuleleyo kwaye ngenxa yoko akufuneki ukhuphe iikopi zawo, kuya kufuneka ukhethe ukukopa ukhusele umculo ukuze iiWindows zikukhuthaze ukhuphele amalungelo osasazo okanye uthenge enye ikopi yomculo xa uwukhuphela kwenye indawo. .
Ukuba awufuni kuyalelwa ukuba ukrazule umculo kwi-CD / iiDVD ozifakayo kwidrive yakho, kodwa endaweni yoko ufuna wonke umculo uzikrazule ngokuzenzekelayo, khetha i Rip CD ngokuzenzekelayo ibhokisi yokujonga.
Ukuba ufuna iCD / iDVD ikhuphe ngokuzenzekelayo emva kokukrazula, khetha i Khupha iCD emva kokukrazula ibhokisi yokujonga.
Kutheni izandla zam zibomvu nje
Xa ugqibile ukwenza useto, cofa kwindawo ethi OK ukuze uzigcine kwaye uvale ibhokisi yencoko yababini.
Xa ufaka i-CD / iDVD yeaudiyo kwi-drive yakho yangaphakathi okanye yangaphandle ukuba awukhethanga i-Rip CD ngokuzenzekelayo kwi-dialog box, iWindows Media Player iyakubuza ukuba uyafuna na ukukrazula loo mculo. Cofa u-Ewe kwaye umculo ukrazulwe kwilayibrari yakho yoMculo.
Sebenzisa uMgangatho weSilayidi isilayida ukulungelelanisa umgangatho womculo okrazukileyo. Ifayile encinci yesayizi encinci iya kugcina indawo kwilaptop yakho ngokucinezela ifayile, kodwa oku kubangela ilahleko yomgangatho weaudio. Owona mgangatho uphezulu ubonelela ngesona sandi sikhulu, kodwa ezi fayile zinokuba nkulu kakhulu. Ukhetho lolwakho ngokusekwe kukhetho lwakho kunye nekhompyuter yakho!
Ukuba awunayo iCD / iDrive drive kwilaptop yakho, cinga ukuthenga umculo wakho kwi-intanethi kwaye uwukhuphele kwikhompyuter yakho. Ngeenkonzo ezifana neAmazon.com's Cloud Player okanye iApple iTunes, nawuphi na umculo owuthengayo ungagcinwa kwi-Intanethi ukuze uwudlale nakwesiphi na isixhobo sekhompyuter. Bona umsebenzi Thenga uMculo kuGcino lweWindows ngeenkcukacha ezithe xaxe malunga nokuthenga umculo kwi-intanethi.
metaxalone 800 mg yexabiso lesitalato
umqolo obuhlungu ukubamba
Elona xesha lilungileyo lokuphelisa ifandesi ye-ebay
thatha iziphumo ebezingalindelekanga
I-boric acid yesitye
Ngaba ii-cbd gummies zisemthethweni
Loluphi udidi lweziyobisi i-tramadol